Ogaden News Agency (ONA) – Dagaalo xoogan oo ka dhacay degmada Qabribayax iyo Ceelxaar/Dhagaxbuur
Dagaalo xoogan oo ka dhacay degmada Qabribayax iyo Ceelxaar/Dhagaxbuur
War aan goordhaweyd ka helnay Xarunta dhexe ee JWXO ayaa naloogu sheegay in uu dagaal xoogan ka dhacay Rigaato oo ka tirsan degmada Qabribayax 5tii Bishan Janaayo 2013. Waxay warbixinta tibaaxday in goobta uu dagaalka ka dhacay ay barkulan ku lahaa 3ex Madax (Regiment) oo ciidamada cadawga, halkaaso ay sirdoonka CWXO la socdeen dheq-dhaqaaqa cadawga oo markay kulmeen ku qaaday dagaal qorshaysan ciidamadii cadawga ee isugu yimid goobtiina lagu jabiyay. Faahfaahinta ilaa hadda la helay waxay sheegtay in dharbaaxo culus cadawga lagu dhuftay iyadoo dhimashada la tiriyay ay gaadhayso 47 askari meesha dhaawaca ay la tageen uu ahaa 67. Waxaa kaloo cadawga laga furtay ilaa iyo 25 qori iyo rasaas farabadan, waxaana lagala wareegay saadkii ay goobta la yimaadeen. Cadawga ayaa isugu baqday goobta loo yaqaano Gosalaleey oo CWXO ay ku dabajoogaan, waxaana dhici karta inuu dagaalka dib u bilowdo saacadaha inugu soo fooleh.
Waxaa kaloo ka mid ahaa wararka aan helnay in 6-1-2013 weerar lagu qaaday ciidamada cadawga oo ku soo baxay dadka beeralayda ee dagan dhulka loo yaqaano Hoola oo ka tirsan Degmada Qabribayax. Ciidamada cadawga ee yimid goobtaa ayuu qorshahooda ahaa inay dadka shacabka ah dhibaateeyaan. Cutub ka tirsan CWXO oo ka warhelay ayaa dagaal ku qaaday waxaana lagaga dilay cadawga inta la hubo 15 askari iyo dhaawaca oo gaadhaya 10 askari.
Sidoo kale 7-1-13 waxaa Ceelxaar oo ka tirsan Degmada Dhaaxbuur lagu jabiyay ciidamada cadawga oo dagaal kadis ah lagu qaaday. Dagaalkaa oo saacada socday ayaan weli la helin tirakoobka khasaaraha soo gaadhay cadawga. Waxaa kaloo jiray dagaal ka dhacay goobta loo yaqaano Anano oo wararka laga helay cadawga ay qirateen in laga dilay ciidamo ay ka mid yihiin 3ex sarkaal.
Sidoo kale waxay dagaalo aanan faahfaahin dheeraad ah laga helin ka socdeen 6-7dii Bishan aaga Wardheer, taasoo aan soo ururin doono khasaaraha cadawga loogu gaystay dagaladaa. .